Wararka Maanta: Sabti, Feb 8 , 2014-Askari lagu dilay Kismaayo iyo ciidamada oo wada Howlgallo
Dilkan ayaa ka dhacay xaafadda Faanoole, waxaana kooxihii dilka geystay ay durbaba isaga baxsadeen goobta kahor intii aysan halkaasi gaarin ciidamada ammaanka.
Dilka kadib ayaa waxa goobta gaaray ciidamo ka tirsan maamulka Jubba kuwaasoo howlgallo ka sameeyay xaafadaha ku dhow dhow halka uu shilku ka dhacay.
Ciidamada ayaa maanta gudaha magaalada Kismaayo ka wada howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo ammaanka, iyadoona ay jiraan dad badan oo loo qabqabtay tuhun, waxaana lagu arkayaa wadooyinka iyo xaafadaha magaalada askar baareeysa dadka iyo gaadiidka.
Ilaa imika ma jiraan masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubba oo ka hadlay arintaasi mana jirto cid sheegatay masuuliyadda dilkaasi.
Max'ed Xaaji Xuseen, Hiiraan Online